Van De Beek Oo Sii Joogi Doono Kooxdiisa Man United.
HomeHoryaalka IngiriiskaVan de Beek oo Sii Joogi doono kooxdiisa Man united.
Tan iyo markii Van de Beek uu ka yimid Man Utd kana yimid Ajax, weli muu muujin calaamadaha qadka dhexe ee cajiibka ah ee uu ulahaa kooxda reer Holland gaar ahaan Champions League Taasi waa sababta xitaa loogu taliyay inuu ka tago kooxda laakiin meelna uma socdo.
Fabrizio Romano, oo ah suxufi ku takhasusay wararka kala iibsiga ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in ciyaaryahanka manchester united uu sii joogo kooxda Premier League Kama fikiri doono inuu baxo ilaa ugu yaraan dhamaadka xilli ciyaareedka.
Si kasta oo ay ahaataba, waxay umuuqatay wax aan macquul aheyn koox kasta inay diyaar u tahay inay bixiso qiimaha United Qiimaha suuqa Van de Beek, waxa uu gaaraya sida laga soo xigtay ProFootballDB, 55.9 milyan euro Maaddaama qandaraaskiisu uu shaqeynayo illaa 2025 guddiga United uma oggolaan doono inuu si fudud u tago.
Ninka reer Holland ayaa sidaas darteed diirada saari doona qeybta labaad ee xilli ciyaareedka waxaa loo maleynayey inuu isbedel sameyn doono bisha January ee dhawaan soo idlaatay lakin wuxuu noqday si la mid ah sidii hore waqti aad u yar ayuu ciyaaray Waxa uu kusoo bilowday kaliya hal jeer sanadka 2021 waana inuu soo jiito dhamaan taageerayasha man united oo uu la guuleysto sida Bruno oo kale.